Ọ nwere ike ịmepụta backlinks dị mma maka ụlọ ọrụ wepụtara n'oge na-adịbeghị anya?
Ọ nwere ike ịbụ ihe siri ike nata nweta backlinks na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce. Otú ọ dị, ị nwere ike izere usoro nyochaa njikarịcha search engine dị ka ọ bụ MUST maka ọganihu azụmahịa gị. Ọ bụ ikpe maka ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ n'ịntanetị. Ọ nwere ike ịghọ ihe dị njọ maka ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị blog.
Ịkwesịrị ịdị njikere na njikọ njikọ ụlọ ga-ewe ọtụtụ oge na mgbalị n'agbanyeghị eziokwu na ị nwere ike ịnụ banyere usoro a site na ụlọ ọrụ njikarịcha engine engine - i want to become a computer. Ha na-ekwe nkwa ịmepụta njikọ dị elu dị elu n'ime otu ọnwa maka ego bara uru. Otú ọ dị, ị kwesịrị ịghọta na ihe niile na-ada ụda nke ọma ka ị bụrụ eziokwu. N'eziokwu, ọ na-ewe ma ọ dịkarịa ala ọnwa isii ma ọ bụ ọbụna karịa dabere na azụmahịa na ahịa niche.
N'ihe mmelite Google ikpeazụ, ọ dị gị mkpa ịkpachara anya maka àgwà nke backlinks ị mepụtara. A ghaghị iwuli ha mkpa na ụlọ ọrụ gị, nke ọma na ebe nrụọrụ weebụ. Ọzọkwa, ị ga-achọ ma enyochala ebe nrụọrụ weebụ tupu oge ma ọ bụ. Ịmepụta backlinks, ị nwere ike iwusi ọnọdụ gị ike na saịtị nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ mee ka ha ghara igosi Google na ị bụghị ebe nrụọrụ weebụ a pụrụ ịdabere na ya.
Nke a post a ezubere ịkọrọ gị ụfọdụ n'ime njikọ kachasị mma njikọta na-arụ ọrụ nke ọma maka ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa.
Ụzọ iji mepụtalinklinks dị mma
Usoro ụzọ akpụgharị
ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Otú ọ dị, mgbe eziokwu nke ọdịda ha, njikọ ha dị. Ndị mmekọ azụmahịa ha n'oge gara aga na-ejikọta ha na ha enweghị ụzọ isi mara na ụlọ ọrụ ndị a adịghị adị na ọkwa ọzọ. Ha ibe weebụ ka na-arụ ọrụ, mana ha enweghị uru ọ bụla ma ọ bụ okporo ụzọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị na-agbaghasị njikọ njikọta enweghị ike ịchọta ha.
Ịme "usoro ndị na-akpụ akpụ," ịnwere ike iji akwụkwọ ndị dị adịghị maka uru gị. Ị nwere ike inweta ihu ọma na ebe nrụọrụ weebụ dị ka nke gị, ịchọta ebe nrụọrụ weebụ na-anwụ anwụ na-ejikọta ha. Ị nwere ike ịjụ ndị a ka ha jikọta na ebe nrụọrụ weebụ gị. Site na mmejuputa atumatu a na-ejikorita onwe ya site n'aka Brian Dean (Backlinko SEO blog creator), i nwere ike iru mma backlinks gi na saịtị gi na usoro ndu.
Ikọ na-ekwuputa ụlọ njikọ
Usoro njikọ ụlọ a na-arụ ọrụ dị mfe ma nwee ike imejuputa ya site na ụlọ ahịa ndị ọ bụla ga-achọ ịmepụta àgwà backlinks. Ihe niile ị chọrọ bụ ịchọta nke ndị isi mmalite weebụ na-ekwu banyere ụdị gị na ngwaahịa ị na-ere, ma jiri obiọma jụọ ha ka ị gbakwunye njikọ njikọ gị na nyocha ha. Otú ọ dị, tupu ị rịọ maka backlinks, ị ga-achọpụta ma ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịbụ ezigbo ohere njikọ maka gị ma ọ bụ na ị gaghị echebara ya echiche. Ihe ọzọ ị ga-achọ ịlele bụ na ekwughị okwu a.